Engineers - Myanmar in Singapore
All GroupsMy Groups Engineers
အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များဖြစ်ရန် ရည်မှန်းထားကြသူများ အပါအ၀င် အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များအဖြစ် ရပ်တည်နေကြသူများနှင့် အင်ဂျင်နီယာလောကတွင် ကျင်လည်နေကြသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အတွေ့အကြုံများ၊ ဗဟုသုတများ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များအား ဤနေရာတွင် မျှဝေဖလှယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ နေ့စဉ် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Latest Activity: Dec 1, 2015 Like 33 members like this
What isagood economical way to bring you excess personal belonging back to Myanmar on the same flight?
Going home forabreak?Too many personal belongings to bring back to Myanmar?Too expensive to bring luggage home under Excess Baggage .Do not want any hassle at the Myanmar Customs.Takealook at our services if you are flying home on Myanmar…Continue ကျွန်တော်ကြားဖူးသောပုံပြင်တခု - သမ္မတနှင့်အခွန်ရှောင်သူများ
Started by Zaw Aung Aug 25, 2014.0Replies
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သမ္မတများစွာ၊ အရွေးမခံရမီက သတင်းထောက်များ အင်တာဗျူးကြသည်။ သမ္မတဖြစ်လိုပါသလား ..မေးခွန်းကို ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ၊ အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါ၊ ဘီလ်ကလင်တွန် ..နောက်ဆုံး ဂျော့ခ်ျဒဘလျူဘွတ်ခ်ျ၊ ဘာရက်အိုဘားမား စသည်တို့က ဖြေကြားချက်မှာ ... မိမိသည်…Continue Autodesk Inventor သင်ချင်လိုပါ
Started by Phyo Sep 8, 2013.0Replies
I want to learn "Autodesk Inventor" to use at work. Any one can teach me or know any person who can teach me, please kindly let me know. My email address is phyo7799@gmail.com.Continue Petrochemical နဲ့ပတ်သက်သည်များ သိချင်ပါသည်.။
Started by sithuaung. Last reply by san May 30, 2013. 1 Reply
ချစ်လှစွာသော ရွှေဖန်များ ခင်ဗျာ...အကူအညီ (သို့) အကြံဥာဏ်လေးများ တောင်းချင်လို့ပါ..။ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံကနေ BE (Petrochemical field) နဲ့ ကျောင်းပြီးထားပါတယ်..ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး ကျောင်းကလွတ်တဲ့ field ကိုပဲ…Continue စင်ကာပူမှာ အိမ် ဘယ်လိုငှားကလဲ ဘယ်ဈေးလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ
Started by Nay La Young. Last reply by Phyu Phyu Feb 18, 2013.2Replies
ကျွန်တော် ကမြန်မာပြည်မှာဖွင့်ထားတဲ့ ချင်းတွင်း နည်းပညာကျောင်းကကျောင်းသားလေးပါ ကျွန်တော်တို့ ကဒီမှာ ၂နှစ်ပြီးရင် စင်ကာပူမှာ နောက်ဆုံးနှစ်ကို လာတက် ပြီး ဘီအီးယူကမှာပါ ဒါကြောင့် အဲ့မှာနေရင်ကျောင်း အကြောင်းကိုတော့ သိနိုင်သလောက်စုံစမ်းထားပါတယ် ဒါပေမဲ့…Continue အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင့်အတွေ့အကြုံများ၊ Myanmar PE Application ..etc
Started by Zaw Aung Aug 19, 2012.0Replies
Download Link…Continue View All
Engineering Job Announcements
Comment by Ma San on September 11, 2011 at 7:35pm let me know where can I attend for QS course? Comment by Elvis Xiao on July 6, 2011 at 9:16pm I want to know CNC machine . help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment by soe thu aung on June 5, 2011 at 11:19am Hi, i am Naing Zaw, i hold BE(MECHANICAL ENGINEERING) in Myanmar,now I am working in singapore and I got the offer of NTU to attend the MSC(MECAHNICAL ENGINEERING) in this August .But I would like to know that i haveaplan to move to US.So,Is this University help me to immigrate to US as after NTU , I have to serve in singapore for3years.Next, if i go to US, Which exams and qualifications are needed? if someone knows about US immigration and others, pls reply me urgently!
Thanks for your sharing. Comment by NYI MIN KHANT on May 12, 2011 at 11:04pm Siemens PLC S7_300_STL_programming_manual.pdf Comment by may kay on April 22, 2011 at 8:45pm Nice to meet u all engineers :) Comment by Thet Win on January 13, 2011 at 4:05pm Hi all,
My degree is B.E(Aeronautical)1993 batch
but here, I amaProject manager in Construction . :)
So i'm saying that I build on Air. LOL Comment by waiyan on January 8, 2011 at 2:30am i want to beaengineer.so everybody teach me about engineering theme
Comment by Wintshwesin on December 23, 2010 at 2:06pm hi!
Nice to meet u all . .
Comment by sawminthumyine on October 29, 2010 at 10:09pm hi ..
nice to meet all ..
mbmsmtm@gmail.com is mine .. Comment by Aye Nyein on October 9, 2010 at 10:09pm Dear Hnin Hnin,
This we call poly engineer.
Now you are fit for all engineering fields. ‹ Previous